I futha piston amanzi: idivayisi kanye nokusetshenziswa
Engxenyeni ezimele akusiyo njalo kungenzeka ukuba ukuxhuma amanzi umphakathi, ngakho umnikazi ngamunye uzama ukwakha kahle eduze kwendlu. Amanzi ngesikhathi esifanayo ke akudingekile ukuba uthwale amabhakede. I futha piston anganikeza kwezidingo zayo ngqo endlini.
Isimiso ezisebenza zedivayisi ulula. Ngosizo ezinye umzamo, le piston e uMbhalo ihamba phezulu naphansi. ngaleyo ndlela Xhumanisa badabula flange ngophawu injoloba, esemgwaqweni ekhaveni phezulu. Yidivayisi ijoyina ngamapayipi phansi, it has a piston. Lapho-ke sokususwa, amanzi adlula lokhu ekuvuleni kudivayisi umphini ivaliwe ezansi ingcindezi amanzi. Uma piston liqala ukuphakama, amanzi, okuyinto ngaphezu kwaso, iqala ukuba uthele ngokusebenzisa ipayipi yokuxhuma. Ngasikhathi sinye, valve phansi ivulekile futhi uketshezi ngaphakathi kwensimbi ushaye futhi.
I futha piston manje ukwenza konke ngokuzenzekela. Kwanele ukufaka ngendlela efanele futhi ukuxhuma kwi-kwamandla. Kulokhu wonke amadivayisi hardware kufanele kube eqinile futhi ithembekile, tube ikakhulukazi itheku lapho amanzi ihlinzekwa ku futha. Kungenjalo wagxila kungabangela ababambelela kwezingange zawo.
Futhi, futha piston kufanele ifakwe isheke valve uqine ngokwanele ukuthi abazange amanzi emuva ku-hose input. Zingaba ulwelwesi noma ibhola. Uma esetshenziswa round valve, kuyinto efiselekayo ukuthi ezenziwe ngengilazi, iraba kanzima noma plastic kanzima.
Nokho, kufanele futhi acabangele yokuthi amadivayisi ayakhelwe a-8 amamitha ukujula. Uma ibanga ebusweni endaweni nesenzakalo komhlaba libanzi, khona-ke kufanele ufake futha subsurface. Iqiniso lokuthi ukuhlinzwa evamile zedivayisi zingaphazamisana umfutho womoya.
Kumele kuqashelwe ukuthi akukhona njalo idivayisi ezisebenza kusukela amapayipi, kungase ukwenza umsebenzi walo ngaphandle kokuphazamiseka. Iqiniso lokuthi isikhathi ukwehluleka kungaba ngezikhathi ezithile e inethiwekhi. Kulokhu, futha kungaba wusizo kakhulu piston mathupha. Nakuba namuhla amadivayisi ayisekho esetshenziswa futhi kunzima eyanele yokuthenga. Kuyoba usizo futhi uma ungenalo ukuhlela ukuchitha sonke isikhathi kusayithi, ngeke usebenzise amanzi nsuku zonke.
I futha piston lingakhiwa futhi kakhulu, ikakhulukazi kusukela design wesifunda zedivayisi ungathola lukhulu. Nokho, kungcono uthenge idivayisi ngaleso provorennogo umkhiqizi.
Futhi ekhaya, futhi ngezinga ezimbonini usebenzisa Axial piston amaphampu. Sinenkosi isisindo kancane, usayizi compact, ongasebenza ngesivinini, kanye lula ukufaka kanye nokugcina. Idivayisi undemanding ukuyisebenzisa, kungenziwa kalula kwalungisa uma kwenzeka ukuwohloka. I ethile kuphela kungenzeka izindleko zawo, okuyinto evame ngempela eliphezulu. Ingase futhi lisetshenziswe wokubacindezela drive ezindizeni, umshini amathuluzi, ogandaganda kanye nezinye izimoto ezinkulu.
Franking machine - idivayisi ... ukumaka izincwadi, amaphasela, ngifaka
Pump siteshi: idivayisi kanye nokusebenza
Sezitofu ukunikeza: emihle nemibi
Minispirtzavod Luxstahl: ukubuyekezwa, izincazelo, imininingwane, imfundo
Household subsurface futha: ukufakwa kanye nokugcinwa
Ukupholisa umoya bafudumale. valve ukupholisa
Izindlela ezintathu lula ukwehlisa usayizi ividiyo
Ngingaba ugeze izinwele gel kwami eshaweni? Amathiphu namacebo
Inhloli Afrika: izibuyekezo, izithombe kanye nokuqukethwe. Bangaki onogwaja Afrika baphile?
Indlela abhalele Putin i-Internet? Umlayezo ovela uMongameli
Tennis WTA. Sibutsetelo mqhudelwano Cincinnati
Kakhulu "tupit" laptop ukuthi yenzeni (lwe-Windows 7)?
Nissan Primera: uhlelo GSM-ezokuphepha imoto, abashayeli sokuhlonishwa
Yukina nodadewethu, u-Olga, Tatiana: Biography nesithombe
Interior Tuning "penny" - konke kungenzeka!
Ibhalansi emhlophe: kuyini futhi ziyini?
Amazinga Electronic: incazelo, isiqu
Shelf ukuhlolwa ukuphila phambi ukusebenza: amazinga, izidingo kanye nezincomo